Lokanga sy Valiha: Ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny… | NewsMada
Lokanga sy Valiha: Ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny…
Mbola resaka politika ihany. Vonto sy donton’ny politika izay mitranga sy atao rehetra? Na potika amin’ny politika… Mafanafana toy ny ratsy ataon-kavana ny raharaha. Tsy inona fa ny amin’ny lainga afafy sy ny tsaho aely. Tsy izay ve ny fototr’izao disadisa politika izao tany am-boalohany? Efa kajikajy sy paipaika politika iniana atao hitsikerana, hanaratsiana, hamendrofendroana, hampitahorana… Tonga hatramin’ny fandranitana, fankahalana, fanakorontanana… Tsy vitan’izay, misy aza ny mahita sy milaza fa fanozongozonana sy fa­nonganana fanjakana izao. Ho tonga hatraiza amin’ity lainga sy tsa­ho? Mby amin’ny hoe ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny.
Lasa mifamitaka an-toerana ho azy eto amin’izany. Haninona na inona no hatao? Man­deha indray izao ny resaka hoe fifanatonana, fifampidinihana, fifampitadiavana marimaritra iraisana… Efa mahazatra? Vao mainka tonga na ahina amin’ny hoe kajikajy sy paipaika politika. Izay tsinona no hevitra sy lalana nodiavina hatramin’izay, mahataman-dra­tsy ny sasany. Ho tonga na hadona amin’ny hoe fiaraha-mitantana? Eny, na ihambohamboana ho tsy misy mitady na miady izany aza. Politika io fa ny politika dia politika: arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa arovana na iadiana. Maila-kandroso ka mihazona ny hafa hiara-dalana indray amin’ny tena… tsy afaka?
Tsy efa nifanaovana tamin’ny vahoaka tamin’ny fifidianana ve, ohatra, ity hoe fifanatonana, fi­fampidinihana, fifampitadiavana izay marimaritra iraisana? Nifanatona ta­min’ny fampielezan-kevitra, nifampidinika tamin’
ny fandaharasana sy vina hotanterahina, nanapa-kevitra tamin’izay marimaritra amin’ny fampindramana fahefana… Hai­lika izany ny vahoaka amin’ny be kajikajy sy paipaika amin’ny fifampidinihan’ny mpanao na mpilalao politika? Izay ilay hoe ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny: ny miteniteny fifanatonana, toa tsy ma­halala ny ao ambadik’izay; ny mahalala, tsy miteny fa ady tombontsoa no mahamaika. Ambanin-javatra sy ambin-javatra ho azy ny vahoaka.
Tsy ny zo sy ny safi­din’ny vahoaka tamin’ny latsa-bato ihany no iniana atao zinona amin’izany, fa izay iainany ankehitriny indrindra koa. Nahoa­na? Hivaha sy hilamina ho azy ve, ohatra, izay manahirana ny vahoaka ifotony amin’izao, rehefa mby amin’ny hoe fifanatonana, fifampidinihana, fitadiavana marimaritra iraisana? Hiaraka amin’izay ampangaina amin’ny lainga raofina sy tsaho kaofina ho tsy mahomby sy tsy mahay amin’ny fitantanana tsinona ireo mitonon-tena ho hany mahay sy mahalala ny mety? Vao mainka ho ady tsy vita ny fiatrehana sy fikendrena sahady izay mety ho tohin’ny raharaha any aoriana, ary ho tavela tanteraka amin’izany ny ambanilanitra.
Ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny: tombontsoa ha­trany no manetsika sy manesika ny sasany amin’izany, arakaraka ny fifandanjan-kery. Izay izao karazana fampisehoan-kery izao? Eny, na tsy tenenina aza. Fan­dranitana sy fihantsiana hampisehoana sy hampiasan’ny an-daniny he­ry… hibolisatra amin’ny fahadisoana. Hoditr’ akon­dro e! Mila malina ny tena na marina toy inona aza. Ny asa ihany no ahazoana mampiseho ho an’izay efa eo an-tsehatra fa miasa ny tena ary mahavita. Na fanamby izay, na vina… Mby amin’izay nifanarahana tamin’ny mpijery fa ha­tao, tsy maintsy vitaina. Tsy iandrasana izay mpamalan-kira midongy se­hatra… tsy amin’ny antony.
Ady na korontona izany no tadiavina sy tetehina hampifanatona? Mbola ho very amin’izay indray ny vahoaka amin’
ny manahirana azy amin’ izay efa nomeny sehatra. Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady amin’ny valanaretina covid-19… Hivaha sy hilamina amin’ izay fifanatonana hifampisintonana amin’ny ady tombontsoa ve izany rehetra izany? Eo ihany ny hoe ny miteny, tsy mahalala; ny mahalala, tsy miteny. Mila vakina bantsilana ny raharaha mba tsy hianjerana amin’ny fitaka bevava. Izay namafy lainga sy nanely tsaho hatrany am-boalohany entiny miady sy hanatrarany izay kendreny, hanao izany hatrany hanamarinan-tena sy ny lainga aman-tsaho natao.
Ny marina na manana ny marina, vitsy teny na mangina? Ary ny diso na mandaingana, tsy main­tsy be vava. Raha tonga tokoa ny tokoa, tsy aleo hangarahara hifanatrehana? Mba tsy ho tsikombakomba na salobon-komana… Izany no fitaka teto hatramin’izay? Ny miteny, tsy mahalala; ny ma­halala, tsy miteny.